China P&M chero epurasitiki chigadzirwa mold kugadzira fekitori Kugadzira uye Fekitori |P&M
Q1: Uri kutengesa kambani kana mugadziri?
A: Isu tiri vagadziri.
Q2.Ndingawana riini quotation?
A: Isu tinowanzo tora mukati memazuva maviri mushure mekunge tawana kubvunza kwako.Kana iwe uchikurumidzira, ndapota tifonere kana kutiudza mune yako email kuitira kuti titange kutora yako.
Q3.Inguva yakadii yekutungamira-nguva yekuumbwa?
A: Izvo zvese zvinoenderana nehukuru hwezvigadzirwa uye kuoma kunzwisisa.Kazhinji, nguva yekufambisa mazuva makumi maviri nemashanu.
Q4.Ini handina 3D kudhirowa, ndoitanga sei chirongwa chitsva?
A: Unogona kutipa muenzaniso wekuumba, isu tichakubatsira kupedzisa dhizaini ye 3D.
Q5.Usati watumirwa, ungave sei nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvemhando?
A: Kana iwe ukasauya kufekitori yedu uye zvakare usina wechitatu bato kuti aongororwe, isu tichava sewe wako mushandi wekuongorora.Isu tichakupa iwe vhidhiyo yekugadzirwa kwemaitiro rondedzero inosanganisira process report, zvigadzirwa saizi chimiro uye pamusoro peruzivo, kurongedza ruzivo uye zvichingodaro.
Q6.Mitemo yako yekubhadhara ndeipi?
A: Mold Payment: 40% dhipoziti neT/T pachine nguva, 30% yechipiri mold kubhadhara usati watumira yekutanga miedzo samples, 30% mold chiyero mushure mekunge mabvumirana masampuli ekupedzisira.B: Kubhadhara Kubhadhara: 50% dhipoziti pachine nguva, 50% isati yatumira zvinhu zvekupedzisira.
Q7: Iwe unoita sei bhizinesi redu kwenguva refu uye hukama hwakanaka?
A:1.Isu tinochengeta mhando yakanaka uye mutengo wemakwikwi kuti tive nechokwadi chekuti vatengi vedu vanobatsirwa kune zvemhando yepamusoro zvigadzirwa.2. Tinoremekedza mutengi wese seshamwari yedu uye tinoita bhizinesi nemwoyo wose uye tinoita shamwari navo, pasinei nokuti vanobva kupi.
Zvakapfuura: CE Certificate China Silicone Collapsible Funnel Kitchen yeMabhodhoro eMvura
Zvinotevera: 2019 Hunhu Hwakanaka China Plastiki Kitchenware 6 Zvidimbu Zvine Ruvara Zvakapetwa Zvipunu zvekuyeresa zvine masikelo
China P&M inyanzvi mold mugadziri nemurume...
China nyanzvi yepurasitiki bhokisi mold kugadzira fekitori
China inyanzvi kugadzira mold p...
Yemhando yepamusoro epurasitiki jekiseni mold Plastic Tea ...